सम्भोगका बेला महिलाहरुले आवाज किन निकाल्छन ? – धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका
सम्भोगका बेला महिलाहरुले आवाज किन निकाल्छन ?
प्रकाशित मिति: २५ माघ २०७१, आईतवार ०५:४७
काठमाण्डौ – सेक्सको क्रममा यदि तपाइको पार्टनर उफ..आह या आउच जस्ता आवज निकाल्छन भन्दैमा तपाइले यो सोच्नु भएन कि, उनले चरम सन्तुष्टि प्राप्त गरिरहेकि छिन। तपाइको पार्टनरले सेक्सको आनन्द लिइरहेको भनेर भ्रममा पर्नु व्यर्थ हुन सक्छ। ब्रिटेनका अनुसन्धानकर्ताहरुले एक अनुसन्धानमा ‘लगभग २५ प्रतिशत महिला सेक्सका क्रममा आवाज निकालेर चरम आनन्द लिएको’ अभिनय गर्ने खुलासा गरेका छन्। अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार महिलाहरु सेक्स गरिरहेको बेला आह..उह जस्ता आवाज यसकारण निकाल्छन् कि, जसले पुरुष साथीलाई उत्तेजित गर्न सकोस्। अनुसन्धानकर्ताहरुले १८ देखि ४८ वर्ष उमेर समूहका ७१ महिलामा यस्तो अनुसन्धान गरेका थिए। अधिकांश महिलाहरु सेक्सवाट चरम आनन्द लिन नपाएको उक्त सोधमा उल्लेख छ। ९० प्रतिशत महिलाहरुले आफुहरु चरम आनन्द सम्म नपुगेको वताएका थिए। ८७ प्रतिशत महिलाहरुले चाहि आफ्नो पार्टनरप्रतिको प्रेम सम्वन्ध सुमधुर राख्नकै लागि यसरी आवाज निकाल्ने गरेको खुलाए। अनुसन्धानकर्ताहरले यस व्यवहारको पछाडि ‘सेक्स लगायतका कार्यमा पुरुषप्रधान मानसिकता हावी भएको’ निक्र्यौल निकाले। यसैले नै महिलाहरु आफ्नो सन्तुष्टिका साथ सम्झौता गरेर पनि पुरुष पार्टनरलाई खुसी तुल्याइरहेका हुन्छन्। महिलामा आर्गज्म अधिकांशतः फोर प्लेको क्रममा धेरै देखिने गरिन्छ। यस क्रममा महिलाहरु सेक्सी आवाज निकाल्ने गर्छन्। महिलाहरु यस्तो आवज त्यसवेला निकाल्छन्, जतिवेला पुरुषहरु चरमोत्कर्षमा पुगेका हुन्छन्। – एजेन्सिको सहयोगमा
२५ माघ २०७१, आईतवार ०५:४७ मा प्रकाशित